Visit Your Parents Or Get Jailed
YB Wong Menyeru IWK menyemak semula kadar kenaikan5kali ganda
YB Wong membantu Desa Timur, Air Itam untuk menurunkan harga IWK
Nurul Izzah: Pastikan negara dapat seperti dijanjikan TPPA
Asalkan Boleh Membantai Anwar, Itulah Bahan Berita Muka Depan Utusan...
မိမိဇာစ်မြစ်ကို မိမိမသိသော မြန်မာ (MYANMAR WHO DON’T KNOW THEIR OWN ORIGIN)
Suruhanjaya Diraja Perlu Ditubuhkan Untuk Siasat Najib & Zahid Hamidi
China children 'must visit parents' http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-23124345
Posted: 01 Jul 2013 10:53 AM PDT
"Ini sekadar tindakan politik balas dendam Ketua Menteri Melaka yang baru dan tidak menolak kemungkinan ia didalangi bekas Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Mohd Ali Rustam," katanya.-Roketkini
Posted: 01 Jul 2013 09:10 AM PDT
Posted: 01 Jul 2013 08:35 AM PDT
Posted: 01 Jul 2013 09:11 AM PDT
Penduduk Desa Timur di Air Itam mengucapkan terima kasih kepada YB Wong Hon Wai, ADUN Air Itam kerana membantu mereka mengurangkan bayaran IWK dari RM8 kepada RM2 sebulan. Mereka telah terlebih bayar wang tersebut sejak 1997 sehingga 2012. Melalui usaha YB Wong, IWK bersetuju untuk membuat penyelarasan. Penyelarasan ini dilakukan kerana flat tersebut dikategorikan semula sebagai rumah kos rendah. Melalui penyelarasan kredit, akaun IWK penduduk melebihi RM1000. Ini bermakna, penduduk-penduduk boleh menggunakan wang tersebut yang diselaraskan dalam akaun untuk pembayaran melebihi 41 tahun. Ini bermakna, mereka tidak perlu bayar untuk melebihi 41 tahun.
Posted: 01 Jul 2013 06:57 AM PDT
The following post is from Marc and Angel's blog which I read regularly. Passionate writers, admirers of the human spirit, and full time students of life, Marc and Angel Chernoff enjoy sharing inspirational advice and practical tips for life on their popular personal development blog Marc and Angel Hack Life. Currently the site contains over 600 articles on productivity, happiness, love, work, and general self improvement, and has attracted over 80 million page views since its inception in the summer of 2006. Their first book 1,000+ Little Things Happy, Successful People Do Differently has just been launched. To buy, CLICK HERE.
"I sit silently each Sunday evening before bedtime and repeat one meditation asamantra in my mind. I get lost in thought foralittle while and then I fall asleep. This weekly ritual has helped me keep things in perspective.
I will never be reckless with another person's feelings.
If I don't know, I will ask questions.
I will always strive to be the best I can be, but I will never try to be someone I'm not.
I will slow down and become conscious of life's simple pleasures.
If I don't finish what I start, my success rate will always be zero.""
Posted: 01 Jul 2013 07:03 AM PDT
Alfian ZM Tahir | July 1, 2013
Tubuhkan sistem yang lebih berstruktur dan wujudkan kumpulan khas bagi memastikan perjanjian TPPA ditepati.
PETALING JAYA: Ahli Parlimen Lembah Pantai, Nurul Izzah Anwar menekankan struktur yang lebih kukuh seperti yang dihasilkan oleh Amerika Syarikat yang menubuhkan Kesatuan Dagangan untuk dilaksanakan dalam Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA).
Naib Presiden PKR mencadangkan supaya mewujudkan satu kumpulan khas untuk meneliti perjanjian TPPA dan memastikan negara mendapat apa yang dijanjikan daripada perjanjian tersebut.
Beliau berkata demikian ketika menghadiri satu forum anjuran Blindspot pada malam khamis lepas. Forum tersebut dihadiri oleh beberapa ahli politik dan dari badan bukan kerajaan (NGO), antaranya Adun Hulu Klang Saari Sungib dan bekas Pengerusi MAS Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman.
Bagaimanapun, Nurul Izzah menyoal adakah Malaysia mampu melakukan perkara yang sama. Ini kerana analisa kos faedah (CBA) yang dijanjikan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) masih belum diterima.
Seorang panelis lain, Dr Rosli Yaacob menerangkan bahawa perjanjian TPPA adalah kerangka konsep dari NAFTA (FTA antara AS, Kanada dan Mexico).
Oleh itu, kesan kesan negatif daripada konsep NAFTA tersebut bakal dirasai oleh Malaysia sendiri.
"Maka kita boleh menjangkakan kesan-kesan negatif yang boleh berlaku di bawah perjanjian TPPA ini berdasarkan beberapa pertikaian dan litigasi yang telah berlaku dalam perjanjian NAFTA tersebut" ujar Dr Rosli.
TPPA adalah penjajahan Amerika
Manakala, Prof Nazari Ismail yang juga pensyarah di Universiti Malaya berkata, suasana perniagaan di saat ini sedang merudum akibat dua ciri utama – syarikat yang besar dan hutang yang banyak.
Beliau juga menyanggah pandangan bahawa TPPA ini adalah penjajahan Amerika kerana rakyat Amerika sendiri sedang merana akibat polisi TPPA.
"Punca utama masalah ialah sistem yang salah yang bertunjangkan industri kewangan. Apa yang perlu ialah perubahan kepada sistem yang menjadi konteks perniagaan sekarang," kata Nazari.
Wakil ketua perunding Malaysia J.Jayasiri yang dijemput untuk sesi soal jawab pula berkata beliau akan memastikan perjanjian ini bakal membawa manfaat kepada Malaysia.
Beliau menambah, adalah penting untuk semua memahami isu 'paten' untuk harta intelek.
Forum tersebut bertujuan untuk memastikan bahawa perjanjian TPPA akan mengutamakan kepentingan kedaulatan negara dan kebajikan rakyat lebih dari apa apa manfaat perdagangan.
Turut dibincangkan adalah perjanjian TPPA harus melalui penelitian daripada parlimen atau jawatankuasa khas parlimen dan bukannya dibuat oleh kabinet.
Posted: 01 Jul 2013 06:58 AM PDT
အမျိုးချစ်သူများ စဉ်းစားစရာ မင်းနိုင်သူ| June 28, 2013
ရခိုင်က ပဋိပက္ခမီး အလျင်အမြန်နဲ့ ပြည်တွင်းထိ ဘာကြောင့် ကူးစက်ပြန့်ပွားခဲ့သလဲ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
Posted: 01 Jul 2013 06:53 AM PDT
မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု အရှိန်ရနေပြီ အင်ဒရူးမာရှယ်| July 1, 2013
၉၆၉ က ၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့ စည်းစနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသော အောက်ခြေလူထု၏ ဘာသာရေးအဖွဲ့အဖြစ် သရုပ်ဖော်ကြသည်။
ထိုအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်သူဖြစ်သော ဘုန်းတော်ကြီး ဦးဝီရသူသည် ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အဓိကရုဏ်းတွင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုဖြင့် ထောင်ချခံခဲ့ရဖူးပြီး သူ့ကိုယ်သူ "မြန်မာဘင်လာဒင်" ဟု တခါက ခေါ်ဆိုသုံး နှုန်းခဲ့ဖူးသည်။
ဦးဝီရသူက မွတ်စလင်ဆိုင်များကို သပိတ်မှောက်ရန် နှင့် ဘာသာခြားလက်ထပ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့သည်။ သူက မွတ်စလင် ဗလီများကို "ရန်သူ့စခန်းများ" ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။
ရိုက်တာသတင်းဌာနမှ ၉၆၉ ၏ မူလဇစ်မြစ်ကို ခြေရာခံကြည့်သည့်အခါ စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်တွင် အစိုးရ အရာရှိတဦးက စတင်ခဲ့သည်ဟု တွေ့ရှိရသည်။ ယခု အစိုးရ လက်ထက်တွင်လည်း အစိုးရထိပ်တန်း အရာရှိကြီးများ၊ သြဇာကြီးသည့် ရှေးရိုးစွဲဝါဒီ ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ ထောက်ခံမှုသာမက နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ အဖွဲ့ဝင် အချို့၏ ထောက်ခံမှုကိုပင် ရရှိနေသည်။
ဦးဝီရသူကို လေးစားထောက်ခံသူတွေထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သာသနာရေးဝန်ကြီးလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးဆန်းဆင့်က" ဦးဝီရသူရဲ့ ဟောကြားမှုတွေက မေတ္တာတရားကို အားပေးဖို့နဲ့ ဘာသာတရားတွေကြားမှာ အပြန်အလှန်လေးစားကြဖို့ပါ၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်ပွားအောင် သူက သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေတယ် ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး" ဟု သူ၏ ၀န်ကြီးသက်တမ်းတွင် ပထမဆုံးသော နိုင်ငံတကာမီဒီယာ တခုနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းအဖြစ် ရိုတ်တာ သတင်းဌာနနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ဦးဆန်းဆင့်သည် မြန်မာစစ်တပ်မှ အငြိမ်းစား ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး တဦးဖြစ်ပြီး ၉၆၉ ဘုန်းတော်ကြီးများ ဦးဆောင်သည့် မွတ်စလင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို သပိတ်မှောက်ရန်တိုက်တွန်းနေမှုကို မှားယွင်းမှုတခုဟု ရှုမြင်ခြင်းမရှိပေ။ " ကျနော်တို့ အခု ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးနေပါတယ်။ ဒါကို ဘယ်သူမှ ပိတ်ပင်လို့မရပါဘူး၊ စားသုံးသူရဲ့ ရွေးချယ်မှု ပေါ် မှာပဲ မူတည်ပါတယ်" ဟု သူကပြောသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကလည်း ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုအပေါ်တွင် လိုက်လျောမှုရှိသော အမြင်ကိုပြသခဲ့သည်။ ယခုဆောင်းပါး အတွက်မှတ်ချက်ပေးရန် သမ္မတရုံးက ငြင်းဆန်ခဲ့သော်လည်း တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ထားရာတွင် ၉၆၉ ဆိုသည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး၏ သင်္ကေတတခု သက်သက်သာဖြစ်ပြီး ဦးဝီရသူ သည်လည်း ဗုဒ္ဓ၏ သားတော် ရဟန်းတပါးဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဦးဝီရသူ နှင့် အခြားဘုန်းကြီးအချို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်ပျံ့နှံ့နေသည့် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးခွဲ ခြား သည့် အဓိကရုဏ်းများနှင့် နီးစပ်ဆက်သွယ်မှုများ ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး မတည်ငြိမ်မှုများသည် ရာစုနှစ်တ၀က်ခန့် ကြာခဲ့သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကာလများအတွင်းမှာကတည်းကိုက စတင်လောင်မြိုက်နေခဲ့ပြီး အရပ်သား အမည်ခံ အစိုးရ အာဏာရယူခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ နောက်ပိုင်းတွင် ဆိုးဝါးရက်စက်သည့် တိုက်ခိုက်မှုများ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယမန်နှစ်က အုံကြွပေါက်ကွဲမှု နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အနည်းဆုံး လူ ၁၉၂ ယောက်ခန့်သေဆုံး၍ လူ ၁၄၀၀၀၀ ကျော် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ကြရသည်။ အများစုမှာ နိုင်ငံမဲ့ မွတ်စလင်များဖြစ်သည်။ ရိုက်တာသတင်းဌာန၏ စုံစမ်းမှုအရဆိုလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အောက်တိုဘာလအတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော မွတ်စလင်များအား တိုက်ခိုက်မှုကို ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ခြင်းခံနေရသည့် ရခိုင် အမျိုးသားရေးဝါဒီများက ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရံဖန်ရံခါ အားပေးကူညီခဲ့ကြသည်ဟု တွေ့ရှိရသည်။
ယခုနှစ် မတ်လအတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မိတ္ထီလာမြို့တွင် မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူ ၄၄ ဦးခန့်သေဆုံးကာ လူ ၁၃၀၀၀ ကျော် နေအိမ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရသည်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက် သတ် ဖြတ်မှုများကို ဘုန်းတော်ကြီးများ ဦးဆောင်သည့် ဒေါသထွက်နေသော ဗုဒ္ဓဘာသာလူအုပ်ကြီးများက ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရိုက်တာသတင်းဌာနက ဧပြီလတွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ မေလတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက မွတ်စလင်နေအိမ်များနှင့် အဆောက်အဦးများကို မီးရှို့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မတည်ငြိမ်မှုသတင်းများ နိုင်ငံအနှံ့ ပျံ့နှံ့နေခဲ့သည်။
၉၆၉ ဂဏန်းသည် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘုရား၏ ဂုဏ်တော်၊ တရားတော် နှင့် သံဃာတို့ကိုရည်ညွှန်းသည့် အတွက် တဖက်သားကို စော်ကားတိုက်ခိုက်လိုသည့် သဘောမျိုး မဟုတ်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်များကို နစ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်သည့် သွေးချောင်းစီး အကြမ်းဖက်မှုများတွင် စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်မှု အနေဖြင့် သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။
၉၆၉ ဦးဆောင်သူ တယောက်ဖြစ်သည့် ဦးဝိမလဘိဝံသကလည်း မွတ်စလင်ဆိုသည် မှာ လုံခြုံအားနည်းသည့် အိမ်အတွင်းသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီး အိမ်ကိုလုယူမည့်သူနှင့် တူသည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ "စည်းမျဉ်း ဥပဒေတွေမရှိဘူးဆိုရင် ငါတို့ရဲ့ လူမျိုးနဲ့ဘာသာ ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်၊ နိုင်ငံတောင်မှ ဆုံးရှုံးသွား နိုင်တယ်" ဟု ဦးဝိမလဘိဝံသက မကြာသေးမီကမှ ဟောပြောခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင် နိုင်ငံတော် ဘာသာ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားခြင်း မရှိသော်လည်း အုပ်ချုပ်သူ အစဉ်အဆက် က ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ဦးစားပေးခဲ့သည်။ မွတ်စလင်များက နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ သန်း ၆၀ မျှရှိသော လူဦးရေ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရလက်ထက်က သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ပတ်သက်သည့် အထူးဌာနတခု ထပ်မံတိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ဘုန်းတော်ကြီးများသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် တစိတ်တပိုင်းပါဝင် ပတ်သက်ခဲ့ကြသည်။ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြခဲ့သော ၂၀၀၇ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အပါအ၀င် စစ်အစိုးရက ၎င်းတို့ကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ယခုအခါတွင် ဦးသိန်းစိန်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်များကြောင့် တိုင်းပြည်ရှိ ၅၀၀၀၀၀ ခန့်ရှိသော သံဃာတို့သည် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ စုရုံးခွင့် များရရှိလာကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားတော်များသာမက ၉၆၉ အယူအဆများကိုပါ ပျံ့ပွားအောင် ဟောပြောနိုင်ဖို့ အတွက် လွတ်လပ်စွာ ခရီးသွားလာနိုင်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေတည်ဖွံ့ဖြိုးစ ဒီမိုကရေစီတွင် ဘုန်းတော်ကြီးများသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၌ ကျင်းပရန်ရှိသည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ဦးတည်လှုပ်ရှားနေသည့် နိုင်ငံရေး အင်အားစုတရပ်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာသည်။ သူတို့၏ စွမ်းအားကို အကြောင်းပြု၍ နောက်ကွယ်တွင် လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုရှိနေသည် ဆိုသည့် အယူအဆတခုလည်း ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကို ယခင်စစ်အစိုးရအတွင်းမှ ခေါင်းမာသူတစုက ကြိုးကိုင်ပြီး မတည်ငြိမ်မှုများ ဖြစ်ပွားစေရန် လှုံ့ဆော်ကာ ပြု ပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းချော်သွားအောင်ပြုရင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ NLD ပါတီ အနိုင်မရစေရန် ဖျက်ဆီးလိုသည့် သဘောဖြင့် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆခြင်းများလည်း ရှိနေသည်။
အဆိုပါယူဆချက်ကို မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း အစိုးရပိုင်းက အချို့ ပြောဆိုမှုများက ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြသနေသလိုရှိသည်။
"တချို့လူတွေက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အရမ်းစိတ်အားထက်သန်ကြတယ်၊ တချို့ကတော့ အပြောင်းအလဲကို မလို ချင်ကြဘူး၊ ဒါကြောင့် လူမျိုးရေး ဘာသာရေးခွဲခြားမှု အဓိကရုဏ်းတွေမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေပါ ကောင်းပါနိုင်ပါတယ်" ဟု သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အနီးကပ်ဆုံးအကြံပေးနှစ်ဦး အနက်မှ တဦးဖြစ်သည့် ၀န်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက ရိုက်တာသတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
အကယ်၍ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကို အာဏာပိုင်အသိုင်းအဝိုင်းရှိ ခေါင်းမာသူများက ကြိုးကိုင်ထိန်းချုပ်နေခြင်း မဟုတ်ဟုဆိုလျှင်ပင် ၎င်းသည် အစိုးရထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်များမှစ၍ အောက်ခြေလူတန်းစားအလွှာများအထိ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ထောက်ခံ နေကြ ပြီး လှုပ်ရှားမှုသည်လည်း အရှိန်အဟုန်ရနေပြီဆိုခြင်းကတော့ အမှန်ဖြစ်သည်။
အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများကလည်း မသိလိုက်ဖာသာနေခြင်းဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပေးခဲ့ကြောင်း ၉၆၉ သံဃာတပါး ဖြစ် သည့် ဦးဝိမလက ဆိုသည်။ "အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် တရားတွေဟောတာကို ခွင့်ပြုပေးထား တယ်၊ ဒါကြောင့် သူတို့လည်း ထောက်ခံတယ်လို့ ယူဆပါတယ်" ဟု ဆရာတော်ကပြောသည်။
မြန်မာမွတ်စလင်အဖွဲ့ချုပ်၏ ရန်ကုန်ကိုယ်စားလှယ်ကလည်း ထိုအချက်ကိုလက်ခံသည်။ "မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေက ပိုပြီးတိုးလာတယ်၊ အစိုးရကလဲ ရပ်တန့်အောင် မလုပ်ဘူး" ဟု ကျောင်းဆရာ ဦးမျိုးဝင်းက ပြောသည်။ သူက ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှ လူမည်းဆန့်ကျင်ရေး ကေသုံးလုံး Ku Klux Klan (KKK) လှုပ်ရှားမှု နှင့် အလားတူသည်ဟု ဆိုသည်။
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးဦးဆန်းဆင့် ကမူ ထိုလှုပ်ရှားမှုတွင် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်ပတ်သက်မှု မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုသည်။ သို့သော် ဦးဝီရသူနှင့် အခြားဘုန်းကြီးများ ဟောပြောနေသည့် အယူဝါဒရေးရာများကို ကာကွယ်ပြောဆို ခဲ့သည်။"သူတို့တွေက ပြဿနာဖြစ်အောင် ဟောပြောနေကြတယ်လို့ ကျနော် မထင်ပါဘူး" ဟု သူကပြောသည်။
မြန်မာ ဘာသာ ၉၆၉ ဂဏန်း၊ စင်္ကြာဝိုင်းတခုနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဧကရာဇ် အာသောကကို ကိုယ်စားပြုသည့် ခြသေ့င်္ လေး ကောင် ပါဝင်သည့် အမှတ်တံဆိပ်သည် ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံတွင် လူတိုင်းသိနေကြသည်။ ထိုအမှတ်တံဆိပ် ပါဝင်သည့် စတစ်ကာများကို တရားပွဲများတွင် အခမဲ့ဝေငှပေးနေသည်။ ထို စတစ်ကာများကို ဆိုင်များ၊ နေအိမ်များ၊ အငှားကားများ နှင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ ရွှေတိဂုံစေတီမှ အမှတ်တရ ပစ္စည်းဆိုင်များတွင် ကပ်ထားကြသည်။ မငြိမ်သက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာနေရာများတွင်လည်း မြင်နေကျဖြစ်သည်။
အာဏာပိုင်အချို့ကလည်း ထိုအမှတ်တံဆိပ်ကို လေးစားရိုသေရမည့် အရာတခုအဖြစ် သဘောထားကြသည်။ ရန်ကုန် အနီးရှိ ပဲခူးဒေသတွင် ကွမ်းယာ ဆိုင်တွင်ကပ်ထားသော ၉၆၉ စတစ်ကာကို မွတ်စလင်တယောက်က ခွာပစ်လိုက်သည့် အတွက် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသည့်နောက် တရားရုံးက ၎င်းကို အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ ခေတ်ကတည်းက ပြဌာန်းခဲ့သည့် ဥပဒေတရပ်ဖြစ်သော "သာသနာကို ညှိုးနွမ်းပျက်ပြားစေမှု" ဖြင့် ယခုနှစ် ဧပြီလအတွင်းက ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ခဲ့သည့်အချိန်ကို နောက်ကြောင်းပြန်၍ ၀ါဒပြန့်ပွားလာသည့်ဇစ်မြစ် နှင့်ပတ်သက်၍ ဦးဝိမလ၊ ဦးဝီရသူနှင့် အခြားသော ၉၆၉ တရားဟောပြောသူများက ရဟန်းလူထွက် ဦးကျော်လွင်ကို အသိအမှတ်ပြုကြ သည်။ ဦးကျော်လွင်သည် အစိုးရအရာရှိ စာရေးဆရာလည်း ဖြစ်ပြီး ယခုအခါတွင် သိသူ တော်တော်နည်းနေပြီဖြစ်သည်။
ယခင်စစ်အာဏာရှင်များက ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ အရေးအခင်းကို လူမဆန်စွာ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ အပြီးတွင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်များကို ၀ါဒကို စည်းရုံးရေးအတွက် ဦးကျော်လွင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းတွင် ရက်စက်စွာ ဖြိုခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အတွက် ဘုန်းကြီးများ အပါအ၀င် လက်နက်မဲ့ ဆန္ဒပြသူ ထောင်ပေါင်းများစွာ သေကြေ ဒဏ်ရာ ရခဲ့ ကြသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်အစိုးရအပေါ် မုန်းတီးစက်ဆုပ်မှုကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဘုန်းကြီးများက စစ်တပ်မိသားစုတို့၏ လှုဒါန်းမှုများကို ငြင်းပယ် သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် စစ်တပ်က ကျဆင်းသွားသည့် ပုံရိပ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် နှင့် အစိုးရကို ရန်သူသဖွယ် သဘောထားသည့် ဘုန်းကြီးများကို ထိန်းချုပ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီးများကို မှတ်ပုံတင်စေပြီး လှုပ်ရှားမှုများကို ကန့်သတ် သည်။ တဖက်တွင်လည်း အစိုးရမီဒီယာများမှ နေ၍ ဗိုလ်ချုပ်များက စေတီပုထိုးများကို ပြုပြင်နေပုံများ၊ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကြီးများကို လှူဖွယ်ပစ္စည်း ဆက်ကပ်နေပုံများကို နေ့စဉ် ပြသခဲ့သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်၌ စစ်အစိုးရက သာသနာတော် ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး ဦးစီးဌာနကို သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းပြီး ဦးကျော်လွင်ကို အကြီးအကဲအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်သည်။ ပါဠိစကားလုံး ဖြစ်သော သာသနာဆို သည်မှာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သာသနာ ဆိုသည်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့်အတူတူပင် ဖြစ်သည်ဟု နားလည်ကြသည်။
သာသနာတော် ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး ဦးစီးဌာနကိုတည်ထောင်ပြီးနောက်တွင် ဦးကျော်လွင်ရေးသားထားသည့် စာများ ကို စုစည်းပြီး "ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်း တယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ" အမည်ရသည့် စာအုပ်တအုပ်ကို ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်ကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် "အကောင်းဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်" အမည်ဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး အစောပိုင်း ကာလများက အသုံးပြုခဲ့သည့် ၉၆၉ အမှတ်တံဆိပ်ကို စာအုပ်အဖုံးတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဦးကျော်လွင်၏ ဇနီးနှင့် သားဖြစ်သူတို့သည် ရန်ကုန်မြို့လယ် အိမ်တလုံးတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ဦးကျော်လွင် ရေးသားခဲ့သော စာအုပ်များကို ဧည့်ခန်းအတွင်းရှိ စာအုပ်စင်ပေါ်တွင် မြင်နိုင်ပြီး ဦးကျော်လွင် ရဟန်းဘ၀က ဓာတ်ပုံများ၊ ကမ္မဌာန်းနည်းပြအဖြစ် တရားပြနေသည့် ဓာတ်ပုံများကို ဘောင်သွင်းချိတ်ဆွဲထားသည်။
အခြားဓာတ်ပုံတခုတွင် ဦးကျော်လွင်နှင့် စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်တို့ စကား ပြောဆို ရယ်မောနေသည်ကို မြင်နိုင်သည်။ ဦးကျော်လွင်သည် အခြားသော စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း နီးကပ် သော ဆက်ဆံရေးရှိသည်ဟု သားဖြစ်သူ မော်တော်ကားတင်ပို့သည့်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသော ဦးအောင်လွင်ထွန်းက ပြောသည်။
"အကောင်းဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်" စာအုပ်ကို ထိုအချိန်က စစ်တပ်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်၏ တိုက် တွန်းချက်အရ ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သူက ပြောပြသည်။ ယခင်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့်လည်း မကြာ ခနတွေ့ဆုံကာ ဘာသာရေးဆွေးနွေးဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသည် အနားယူခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် အများပြည်သူ မြင်ကွင်းမှ ပျောက်ကွယ်နေခဲ့သည်။
"အကောင်းဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ" ဆိုသည့် စာအုပ်မှာ ဈေးကွက်တွင် ပြတ်သွားပြီဖြစ်၍ ဦးအောင်လွင်ထွန်းက နောက်တကြိမ် ထုတ်ဝေရန်စီစဉ်နေသည်။ "လာမေးကြတဲ့ သူတွေ အများကြီးပဲ" ဟု သူကပြောသည်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော မွတ်စလင်များကို သပိတ်မှောက်ရန် အပါအ၀င် ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုများကို သူက ထောက်ခံသည်။ "ဒါက ကျနော်တို့ရဲ့ သာသနာကို ကာကွယ်ဖို့ စည်းရိုးကာတာပါပဲ" ဟု ဆိုသည်။
နာမည်ကို ထုတ်ဖော်မရေးသားရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သော ဦးကျော်လွင်၏ ဇနီးဖြစ်သူကလည်း ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကို ထောက် ခံသည်။ မွတ်စလင်နှင့် လက်ထပ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် မင်္ဂလာဆောင်တွင် ဗုဒ္ဓ၏ ရုပ်ပုံပေါ်သို့ ခြေဖြင့်နင်းဖြတ် သွားရင် အဓမ္မ ခိုင်းစေခြင်းခံရသည်ဟု သူကပြောသည်။ ရှီယက် မူဆလင်များ၏ ရိုးရာဓလေ့တွင် တိရိစ္ဆာန်များကို ရက် စက်စွာ သတ်ဖြတ်လေ့ရှိသဖြင့် လူသတ်ရန်လည်း ၎င်းတို့အတွက် လွယ်ကူသည်ဟု ဆိုသည်။
သာသနာတော် ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး ဦးစီးဌာန၏ အကြီးအကဲဖြစ်နေစဉ် ဦးကျော်လွင်နှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့သော ဘုန်းတော်ကြီး များထဲတွင် ကျောက်ဆည်ဒေသမှ ဦးဝိစိတ္တဘိဝံသလည်း ပါဝင်သည်။ သူ့ကို ယနေ့အချိန်တွင် ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင် လှုံ့ဆော်နေသော ဦးဝီရသူအဖြစ် လူသိများလာသည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးနောက် ဦးဝီရသူနှင့် ဦးကျော်လွင် အဆက်အသွယ် မပြတ်ရှိနေခဲ့သည်ဟု ဦးအောင်လွင်ထွန်းက ပြောသည်။ ဖခင်ဖြစ်သူက ဦးဝီရသူ ၏ အတွေးအမြင်များအပေါ် လေးစားမှုရှိသည်ဟု သူက ယုံကြည်သည်။ "သူက တခြားသူတွေ မလုပ်နိုင်တာကို လုပ်နေတာ၊ အမျိုးဘာသာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတာပါ" ဟုပြောသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ဦးကျော်လွင် ကွယ်လွန်သည့်အခါ အသက် ၇၀ ရှိပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းနှစ်ထဲမှာပင် ဦးဝီရသူက ၉၆၉ အကြောင်း တရားများ စတင်ဟောပြောခဲ့သည်။ ထို့နောက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတခု တိုးတက်လာနေသည်ဟု အစိုးရကို အစီရင်ခံခဲ့သည်။ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ထားများသည် ၂၀၀၁ ခု နှစ် မတ်လတွင် တာလီဘန်တို့က အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံ ဘာမီယန်ရှိ ဗုဒ္ဓဆင်းတုများကို ဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းနှင့် စက်တင် ဘာလတွင် အယ်လ်ကေဒါ တို့က အမေရိကန်နိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပြီးနောက်တွင် ပိုမိုတိုးပွားလာနေခဲ့သည်။
နောက် ၂ နှစ်ကြာသည့်အခါ ၎င်း၏ ဇာတိကျောက်ဆည်မြို့တွင် ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် သွေးထိုးလှုံ့ဆော် သည့် လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေမှုဖြင့် အစိုးရက ဦးဝီရသူကို ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ကျောက်ဆည် ပဋိပက္ခတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက မွတ်စလင် ၁၀ ဦးခန့်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု အစိုးရက သတင်းထုတ် ပြန်ခဲ့သည်။ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုတွင် ပထမဆုံး သွေးစွန်းခြင်းဖြစ်၏။
ဦးဝီရသူသည် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကိုပေးသည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မြန်မာဘင်လာဒင်ဟု သူ့ကိုယ်သူကင်ပွန်းတပ်ပြီး ၉၆၉ ၏ စစ်သွေးကြွ မျက်နှာစာကို ထုတ်ပြခဲ့သည်။ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကို မွန်ပြည်နယ်မှ ဘုန်းတော်ကြီးများက စတင်စုစည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖြစ် ဂုဏ်ယူလေ့ရှိကြ၏။ ယခင်နှစ် ဆူပူမှုများ ဖြစ်ပွားသည်မှစ၍ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု ကွန်ယက်တခုကို တနိုင်ငံလုံးတွင် စုစည်းဖြန့်ကျက်နိုင်ခဲ့သည်။ မွန်ပြည်နယ်မြို့တော် မော်လမြိုင်တွင် မွတ်စလင်ပိုင် ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီတခုကို သပိတ်မှောက်ရာတွင် ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် မွတ်စလင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် သပိတ်မှောက်ရေးကို ၉၆၉ ၏ ပင်မရည်မှန်းချက် အဖြစ် တိုးချဲ့လာခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် ဗြိတိသျှထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့စဉ်ကတည်းက အစိုးရထိပ်ပိုင်းရာထူးနေရာ အမြောက်အများကို မွတ်စလင်များ ရယူနိုင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းယူခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အခြေအနေ ပြောင်း လဲသွားပြီး မွတ်စလင် အရာရှိများ ခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူး တိုးမြှင့်ပေးခြင်းတို့ကို ဟန့်တားပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်အနေဖြင့်လည်း မွတ်စလင်များသည် စီးပွားရေးတွေ လွှမ်းမိုးထားပြီး ရရှိသည့် အမြတ်အစွန်းများဖြင့် ဗလီများတည်ဆောင်ကြသည်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများကို ဇနီးမယားအဖြစ် ၀ယ်ယူကာ အစ္စလာမ် အတွေးအခေါ်များကို ပြန်ပွားအောင် လုပ်နေကြသည်ဟု အမြင်မျိုးရှိခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် မူဆလင်လုပ်ငန်းများကို သပိတ်မှောက်ကြသည့် ကိစ္စသည် တရားမျှတမှုရှိသည်ဟု ၉၆၉ ကို ထောက်ခံသူ အသက် ၃၁နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးရှေ့နေ ဒေါ်ဇာနည်ဝင်းထွန်း က ပြောသည်။ မွတ်စလင်များက ဗုဒ္ဓဘာသာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ရှောင်ကြဉ်ထားသည်မှာ ကြာမြင့်လှပြီဟု သူကဆို၏။ "သပိတ်မှောက်ဖို့ ကျမတို့စခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့က အရင်လုပ်တာပါ၊ ကျမတို့က သူတို့နည်းနဲ့ ပြန်တုန့်ပြန်တာမျိုးပါပဲ" ဟု ဒေါ်ဇာနည်ဝင်းထွန်းက ပြောသည်။
သူဆိုလိုသည်မှာ တောင်အာရှ နိုင်ငံများမှ မွတ်စလင်အိမ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဖော်ပြထားလေ့ရှိသော ၇၈၆ ဆိုသည့် ဂဏန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းက အစ္စလာမ် ဘာသာတရားအရ အလ္လာရှင်၏ အမည်၊ မေတ္တာနှင့် ဂရုဏာဖြင့် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသော ဂဏန်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများက သူတို့စိတ်ထဲစွဲနေသည့် သချာင်္ဗေဒင်နည်းအရ ဂဏန်းသုံးလုံးကို ပေါင်းကာ ရရှိသည့် ၂၁ ဂဏန်းဆိုသည်မှာ ၂၁ ရာစုတွင် မွတ်စလင်များက ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချို့က ထိုသို့နားလည်လက်ခံထားကြသည် ဆိုခြင်းကို လွယ်ကူစွာ သိနိုင်ပါ သည်။ ဥပမာပြရလျှင် မွတ်စလင်တို့၏ ဘာသာရေးနှင့် စားသောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဓလေ့အရ ဗုဒ္ဓဘာသာစားသောက် ဆိုင် များတွင် သွားရောက်စားသောက်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။ မွတ်စလင်များက အငယ်စားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းကဏ္ဍ အချို့တွင်လည်း လွှမ်းမိုးထားသည်။ မွတ်စလင်ပိုင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည့် Naing Group၊ Motherland နှင့် Fatherland ကုမ္ပဏီများသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့တွင် တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာနေသည့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များကို ပို၍ကြီးစိုးလာနေကြသည်။
သို့သော်လည်း အမေရိကန် ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ၍ တန်ကြေးရှိသည့် စီမံကိန်းများကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသော အကြီးဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများကို ယခင်စစ်အစိုးရနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော သူဌေးကြီးများက ပိုင်ဆိုင်ပြီး ၎င်းတို့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။
ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖောက်သည်များသည် မွတ်စလင်ပိုင်ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများနှင့် ချုပ်ဆိုထား သော စာချုပ်များကို ဖျက်သိမ်းပစ်ကြကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားသည့် အချိန်တွင် ၉၆၉ ထောက်ခံ သူများက လာရောက် တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးကြမည်ကို စိုးရိမ်၍ဖြစ်ကြောင်း အာဏာရ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် မွတ်စလင်အမျိုးသား ဦးရွှေမောင် ကပြောသည်။ "မြို့နယ် တခုမှာ ဖြစ်လိုက်ပြီ ဆိုရင် တခြားနေရာတွေမှာပါ ထိခိုက်သွားမှာ ကျနော်စိုးရိမ်တယ်" ဟု သူကပြောသည်။
၉၆၉ ထောက်ခံသူ ဒေါ်ဇာနည်ဝင်းထွန်းက မွတ်စလင်များကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းမှုရအောင်လုပ်ခြင်းပင် ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ မိတ္ထီလာရွှေဆိုင်တွင် မွတ်စလင်ဆိုင်ရှင် နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဈေးဝယ်သူ အချင်းများရာမှ စတင် ခဲ့ သည့် ပဋိပက္ခကို ဥပမာအဖြစ် သူက ထောက်ပြသည်။ "တကယ်လို့ သူတို့က ကိုယ့်လူမျိုးဆိုင်မှာပဲ ၀ယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး" ဟု သူကပြောသည်။
သူ၏ မှတ်ချက်က ခွဲခြားနေထိုင်ခြင်းဖြင့် လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ခွဲခြားမှု အဓိကရုဏ်းများကို အဖြေရှာနေသည့် အစိုးရ၏ မူဝါဒကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည်။ ယမန်နှစ်က ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၁၅၃၀၀၀ ခန့် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အများစုမှာ လုံခြုံရေး အစောင့်အကြပ်ဖြင့် ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် နေထိုင်နေကြရပြီး မိမိတို့၏ ဘ၀ဟောင်းကို ပြန်သွားနိုင်ရန် မျှော်လင့်ချက် ရေးရေးသာရှိသည်။
သြဇာရှိသည့် ဘုန်းတော်ကြီး အချို့ကမူ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကို လူသိရှင်ကြား ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် Facebook သုံးစွဲသူ အချို့ ကလည်း ၉၆၉ စတစ်ကာ ကပ်ထားသည့် အငှားကားများကို သပိတ်မှောက်ရန် စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။
မွန်ဘုန်းတော်ကြီး ဦးဝိမလက အခြားသံဃာများ၏ ဝေဖန်မှုကို အရေးမစိုက်ဟု ပြောသည်။ " ကောင်းတာလုပ်နေတာကို သူတို့ မတားမြစ်သင့်ဘူး" ဟု သူကဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့ အနီး၌ ဇွန်လ လယ်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော သံဃာအစည်းအဝေးသို့ ဦးဝီရသူ တက်ရောက်လာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် အမျိုးသမီးများအား မွတ်စလင်ယောက်ျားများနှင့် လက်ထပ်ခွင့်ကို တားမြစ်သည့် ဥပဒေကို တင်ပြခဲ့သည်။ ထိုအစည်း အဝေးသို့ သံဃာ ရာပေါင်းများစွာ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဦးဝီရသူ ၏ အဆိုတင်သွင်းမှုကို အမေရိကန်တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခဆရာတော်လည်း ဖြစ်သူ ဦးဓမ္မပီယက ထောက်ခံခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်မှာ အာရှရှိ အခြားသော ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်များနှင့် ဆက်သွယ်မှုများ ရှိသလို ၎င်းတို့၏ လေးစားကြည်ညိုမှုကိုလည်း ရရှိ ထားသည်။
ဦးဓမ္မပီယက ၉၆၉ သည် ငြိမ်းချမ်းသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလားအလာကောင်းနေသည့် အသွင်ကူးပြောင်း မူတွင် အားပေးကူညီနေကြောင်းပြောသည်။ "၉၆၉ က ဘာမှ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာ မရှိပါဘူး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ငြိမ်း ငြိမ်းချမ်းချမ်း ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ အမြဲနေချင်ခဲ့တာပါ" ဟု ဦးဓမ္မပီယက ပြောပြသည်။
၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု၏ ပြိုင်ဖက်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ ဆက်သွယ်မှုမှာ ရန်လိုမှုနှင့် လိုက်လျောမှု သဘော နှစ်ခုလုံး ပါဝင်နေသည်။
မတ်လနှောင်းပိုင်းက YouTube ၀က်ဆိုက်တွင် တင်ခဲ့သော မိန့်ခွန်းတခုတွင် NLD ပါတီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အနီးကပ် အတွင်းစည်းတွင် မွတ်စလင်များက လွှမ်းမိုးထားသည်ဟု ဦးဝီရသူက ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကြိုက်တဲ့မြို့က NLD ရုံးကိုသွားကြည့်လိုက်၊ မုတ်ဆိတ်နဲ့ လူတွေတွေ့လိမ့်မယ်" ဟု သူကဆို၏။
ဦးဝိမလကို ထောက်ခံကြသူများကလည်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ချိန်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လျှက်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖက်မှ ၀င်ရောက်ပြောဆိုခြင်း မရှိသည့်အတွက် ၎င်းတို့ နေအိမ်များရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓာတ်ပုံများကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
လူမျိုးဘာသာရေးခွဲခြားသည့် ပဋိပက္ခများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ငြိမ်သက်နေမှု ကြောင့် မွတ်စလင်များကလည်း အမျက်ထွက်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာမွတ်စလင်အစည်းအရုံးကလည်း NLD ပါတီဝင်များသည် ၉၆၉ အမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းများကို ရန်ကုန်တွင် ဖြန့်ဝေ နေသည်ဟု စွပ်စွဲသည်။
NLD ၏ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးဥာဏ်ဝင်းက အချို့ပါတီဝင်များ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်မှုရှိခဲ့သည်ဟု ၀န်ခံပြောဆို ခဲ့သည်။ "ဒါပေမယ့် NLD ဟာ ပါတီဝင်တွေရဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ အခွင့်အရေးကို စွပ်ဖက်တားဆီးမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ လူမှုရေး ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ယုံကြည်ရာကို လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်" ဟု သူကဆိုသည်။
အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် တက္ကဆီမောင်းသူ ကိုမင်းသက်လင်းက ထိုအခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ အသုံးချသည်။ သူ၏ ကား တံခါး အတွင်းအပြင် နှစ်ဖက်လုံးတွင် ၉၆၉ စတစ်ကာများကပ်ထားသည်။ မင်းထက်လင်းက မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး စိတ် ဓာတ်ပြင်းထန်သည်ဟု အများသိကြသည့် သာကေတမြို့နယ်မှ NLD ခေါင်းဆောင် တယောက်လည်းဖြစ်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်းက သာကေတမြို့နယ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ကိုမင်းသက်လင်း၏ အိမ်အနီးရှိ မွတ်စလင်စာသင် ကျောင်းတခုကို ဗလီတခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန် လျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရောက်ရှိလာသည့် အချိန်တွင် အဆောက်အဦက ပြိုပျက်သွားပြီဖြစ်သည်။
တလကြာသည့်အခါ ဦးဝိမလ နှင့် အခြားမွန်ဘုန်းကြီး နှစ်ပါး သာကေတသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ၉၆၉ တရားပွဲ သုံးရက် ဟောကြားကာ"ဓမ္မဆေး" ဟု အမည်ရသည့် စာစောင်များ ဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။ ထိုစာစောင်များတွင် "အရှုံးမပေးဘဲ တိုက်ခိုက်ကြ" ဟု လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းထား၏။
ယခုအချိန်တွင် ထိုအဆောက်အဦကို ချိပ်ပိတ်ပြီး ရဲများက စောင့်ကြပ်နေသည်။ "လူတွေက ဒီမှာ ဗလီ မရှိစေချင်ကြဘူး" ဟု ကိုမင်းသက်လင်းက ပြောသည်။
သူ ပြောသည့်အတိုင်းပင် ၉၆၉ တို့၏ ဘာသာရေး သွေးများကို နိုးကြားစေသည့် လှုံ့ဆော်ရေးတေးသံကခေါင်မိုးများ ပေါ်တွင် ပျံ့လွင့်နေသည်။ ထိုသီချင်းကို အနားရှိ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းက ကျောင်းလာအပ်ကြမည့် ကလေးငယ်များ အတွက် ဖွင့်ထားပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted: 01 Jul 2013 06:50 AM PDT
The announcement has promptedagreat deal of anguished debate. Some politicians who have previously tried to capitalize on anti-Rohingya sentiment are beginning to appreciate that such policies also have costs — especially when it comes to Burma's international reputation. If these views gain strength, they could help to minimize senseless violence.
Supporters of the ban argue that keeping the number of Rohingya under control isamatter of national security. It's an issue, they believe, that takes precedence over the protection of human rights. Advocates of the restrictions defend them by cherry-picking examples from other countries: China's one-child policy, Vietnam's two-child policy, and so forth. What the comparison tends to overlook, however, is that these countries chose these policies as family planning measures. That has little to do with the Arakan law, which targets only one small group for reasons that have little to do with total population control. (The Rohingya make up approximately one percent of Burma's population.)
The advocates also invoke "national security" without clearly defining what they mean by the concept. A well-known supporter of the ban claims that one major national security issue at stake is illegal immigration and the corruption ofaweak state that allows it to grow. Oddly though, the two-child policy doesn't apply to Chinese immigrants, who have beenasource of tension in the past. With this exception, it is hard to buy the notion that illegal immigration is the true underlying concern.
They see the issue in zero-sum terms where the growth of the Rohingya population will infringe upon the rights of Buddhists. The resulting policy reaction is one that legitimizes exclusion and violence. In the national security mentality of these advocates, the security provider is none other than the state (i.e. the military). In order to wipe the Rohingya out, they don't mind delegating power back to the once-abusive patron under the justifications of "national interests" and their half-baked understanding of "realpolitik."
A good example of this is the '969' movement,aloosely organized Buddhist group that agitates for the protection of Buddhist privileges and strongly advocates the two-child limit. The group makes no distinction between Rohingya and other non-Rohingya Muslims in the country. The group calls foraboycott against businesses run by Muslims and distributes anti-Muslim propaganda, including pamphlets, religious sermons, DVDs, and Facebook posts. The group has also been accused of instigating recent anti-Muslim violence.
President Thein Sein's spokesperson, for example, has distanced the government from the two-child policy by dismissing it asalocal initiative. "We will look into it," he has told the press — and that's as far as the government is willing to go. The government, which desperately needs international acceptance and actively seeks assistance, was quick to affirm that it would take international standards into consideration when it implementsapopulation policy in the future. Opposition leader Aung San Suu Kyi also weighed in, saying, with the caution characteristic of her approach to this issue: "If this [reported policy] is true, then it is against the law." Aung San Suu Kyi, who isaNobel Peace Prize laureate, has faced criticism for failing to defend minority rights.
Both reformist incumbents and opposition groups must be reminded that any democratization process entails defining the demos, those who constitute the citizenry of the country. This isafundamental point that has nothing to do with national security. The government must address the two potentially explosive questions integral to any democratic transition: Who isacitizen of the state, and how are the rules of citizenship defined? How history ultimately judges Burma's transition will depend on how well and fairly they address these questions.
This article first appeared on June 7, 2013 on Foreign Policy's Transitions Blog.
Min Zin isaPhD candidate at the University of California, Berkeley. This commentary originally appeared on the Foreign Policy blog "Transitions." The views expressed here are those of the author.
Posted: 01 Jul 2013 06:45 AM PDT
RANGOON — Wimala Biwuntha isapint-sized monk with boyish features who could barely see over the lectern during his recent sermon toamesmerized crowd ataRangoon monastery. Yet his stature in Burma grows daily, thanks to his stark message to fellow Buddhists: "We are digging our own graves."
Wimala hails from Mon,acoastal state near Rangoon. The Mon pride themselves on being Burma's earliest converts to Buddhism. In October, with violence raging in Arakan, he and fellow Mon monks set up the "Gana Wasaka Sangha" network to propagate 969 teachings.
It distributesamap showing Burma surrounded by Muslim-majority countries where Buddhism once flourished, such as Indonesia. "If necessary," runs its slogan, "we will buildafence with our bones."
The Mon monks have delivered dozens of sermons in known sectarian trouble-spots. Wimala's speech in the Pegu farming town of Minhla in February was followed by rising communal tensions, Muslim residents told Reuters. Four weeks later,aBuddhist mob destroyed mosques and Muslim houses in the town. Many of Minhla's 500 Muslims fled.
The Mon monks plan to teach 60,000 children at more than 160 schools in Rangoon and Moulmein, said Yin Yin Htwe, 34,aWimala donor and disciple who runsajewelry business. "I want children to learn the dhamma (Buddhist teachings), improve their manners and protect the nation and religion," she said.
Policemen stop civilians at one of the road blocks that surround Aung Mingalar, Sittwe's last Muslim quarter that is home to 6,500 people. (Photo: Jpaing / The Irrawaddy)
Stores are open out there. Sidewalk restaurants are serving bottles of Mandalay beer. There are no barbed-wire roadblocks marking neighborhood boundaries, no armed policemen guarding checkpoints. In the rest of Sittwe, this city of 200,000 people along Burma's coast, no one paysabribe to takeasick baby to the doctor.
A year after sectarian violence tore through Burma, the fury of religious pogroms has hardened into an officially sanctioned sectarian divide,aforay into apartheid-style policies that has turned Aung Mingalar intoaprison for Sittwe's Muslims and that threatens this country's fragile transition to democracy.
Muslims, Tuson says, are not welcome in today's Burma.
'They Want to Muslimize This Land'
The troubles here were, at least initially, driven by ethnicity as much as religion. To the Arakanese, who dominate this state, as well as to Burma's central government, the Rohingya are here illegally, "Bengalis" whose families slipped across the nearby border from what is now Bangladesh. Historians say Rohingya have been here for centuries, though many did come more recently. Their modern history has beenalitany of oppression: the riots of 1942, the mass expulsions of 1978, the citizenship laws of 1982.
What started with the Rohingya has evolved intoabroader anti-Muslim movement, helping igniteaseries of attacks across Burma—from Meikhtila in the country's center, where Buddhist mobs beat dozens of Muslim students to death in March, to Lashio near the Chinese border, where Buddhist men swarmed through the city burning scores of Muslim-owned stores in May.
Political frustration fed on economic frustration, with millions of poor rural residents flocking to Burma's cities only to find continued poverty in ever-growing slums. Inacountry that is about 90 percent Buddhist, Burma's Muslims, who number as little as4percent of the population, became political bogeymen.
U Shwe Maung,atop official with the Rakhine Nationalities Development Party (RNDP), the state's most powerful party, will tell you about the problems with the Rohingya: They have too many children, they are angling for political clout, they claim to be citizens.
"We are not willing to live with them," the one-time high school English teacher says in his quiet voice. He's an avuncular man, friendly and unfailingly polite. "They want to Muslimize this land. They want power."
Anti-Muslim sentiment has been magnified by an increasingly virulent strain of Buddhist nationalism, asaonce-obscure group of monks nurtures populist fears ofagrowing Muslim threat. Muslims are criminals, they say,a"poison" driving up land prices and pushing aside the Buddhist working class. Crowds pack monasteries and prayer halls to hear the monks' speeches. Recordings are sold in sidewalk stalls along Burma's streets.
"My grandfather was from Aung Mingalar. My father was from Aung Mingalar. I'm from Aung Mingalar," says Win, his teeth stained red from years of chewing betel nuts. At 32, he has spent nearly his entire life working at his restaurant, the Love Tea Shop. It filled with people every day, particularly after prayers at the mosque. "I just want to stay as long as I can."
But it did. It began last year on May 28, with the rape and murder ofaBuddhist woman byagroup of Rohingya men inavillageafew hours from here. Days later,abus carrying Muslim travelers was surrounded byaBuddhist mob and 10 Muslims were killed. Five days after that, Rohingya mobs attacked Arakanese near the Bangladesh border. It's unclear how many people died.
Across Burma, the army and the police have done little to protect Muslims throughayear of violence, and rights groups say they have often joined in the attacks. It's still unclear why it was different in Aung Mingalar.
"The Bengalis lit their own houses on fire, because they knew they would get another house" in the refugee camps, says U Win Myaing, the Arakan State assistant director for communications. "Plus, they thought the fires would spread to Rakhine [Arakanese] areas and burn those houses down."
There is one way to get out. The bribe to pass the checkpoints is 10,000 kyats (about $10) each way, according to current and former residents. That'salot of money here, but plenty of people are paying it. While no one is sure of the neighborhood's size—aid workers say it was probably about 4,000 before the violenc —it's now dropping fast.
A Thai restoration team is expected to spend more than 100 million baht ($3.23 million) on the project, the source said, speaking on condition of anonymity. "If needed, they will likely spend more," the source added.
"According to historical records and our findings, we, both Burmese and Thai experts, can now say the tomb belongs to Uthumphon," Mickey Heart, who has been granted full authority on the project by the Uthumara Memorial Foundation,asection of the Association of Siamese Architects, told reporters on Saturday.
"If we are granted [permission], the project will take at least two years," Heart said.
According to Burmese history records, King Hsinbyushin (1736-76), the third king of Burma's Konbaung Dynasty, invaded the ancient Thai capital of Ayutthaya in 1767 and brought many of its subjects, including Uthumphon, back to his own capital, Ava.
Dr. Tin Maung Kyi,awell-known Burmese historian and Mandalay resident, previously told The Irrawaddy that Uthumphon was in monkhood when he was brought to Ava asaprisoner of war, and that after dying in captivity, the Thai king's body was buried at Linzin Hill.
The authoritative "History of Ayutthaya" website says Uthumphon—who is better known as King Dok Madua, or "fig flower," in Siamese history—was the youngest son of King Borommakot andaminor queen, Phiphit Montri. He was appointedacrown prince by his father.
Posted: 01 Jul 2013 06:27 AM PDT
"Burma has to address the problem," Malaysian Foreign Minister Anifah Aman told reporters atameeting of Association of Southeast Asian Nations (Asean) ministers in Brunei, makingarare intervention in another member's internal affairs.
"I know it's complex but they have to address the problem inatransparent manner so that we can see what actions had been taken … I think the perpetrators have to be brought to justice and so that it does not occur again."
Anifah said he had been satisfied by his Burma counterpart's response that the government was taking the issue seriously.
Anifah said the Organization of the Islamic Conference (OIC) had voiced concern that Asean's Muslim-majority nations were not doing more to resolve the problem. Malaysia's Bernama news agency also reported that Anifah had asked Burma to allow an OIC contact group to visit the country and be given full cooperation.
Malaysia, bagi orang UMNO, dan politik Malaysia terutamanya hanya boleh dibicarakan, atau dimainkan oleh orang Malaysia sahaja. Malah para macainya turut galak menyatakan bahawa ehwal politik Malaysia hanya patut dikerjakan oleh mereka yang 'ahli'. Dalam kata lain, hanya politisi UMNO. Selain daripada itu, tak boleh.
Muka depan Utusan Malaysia minggu lalu memetik Jusuf (disebut 'Yusuf') sebagai menyebut bahawa Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai imaginasi yang melampau. Selalunya kalau tajuk berita seperti ini disiarkan Utusan Malaysia, kita akan menyangka bahawa Utusan Malaysia mahu bercerita mengenai fantasi pelik Anwar yang pernah diberitahu kepada Jusuf.
Posted: 01 Jul 2013 05:58 AM PDT
ဦးရွှေမန်း ဘာကြောင့် ကာလုံ အစည်းအဝေး ခေါ်တာလဲ သာလွန်ဇောင်းထက်| July 1, 2013
၂၀၁၂ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ပြည်လုံးကျွတ်ညီလာခံတွင် တွေ့ရသည့် သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဦးသိန်းစိန် (ဓာတ်ပုံ – သာလွန်ဇောင်းထက် / ဧရာဝတီ)
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းက ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီ(ကာလုံ) အစည်းအဝေး ခေါ်ယူဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထံကို သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ တောင်းဆို လိုက်တာကြောင့် မကျင်းပဖြစ်တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အစည်းအဝေး ဒီနေ့ မနက် ကျင်းပတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ဒီနေ့ထုတ် The Voice နေ့စဉ်သတင်းစာရဲ့ မျက်နှာဖုံးသတင်းကလည်း ကာလုံအစည်းအဝေး ဒီနေ့လုပ်မယ်လို့ ရေးထားတာကြောင့် ဒု-သမ္မတဟောင်း သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး ရာထူးက အနားယူတဲ့အချိန်မှာ နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆနိုင်တဲ့ သမ္မတ၊ ဒု-သမ္မတများ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဌများ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များ ပါဝင်ကြရတဲ့ ဒီလို ထိပ်တန်းအဖွဲ့ကြီးရဲ့ အစည်းအဝေး ဘာကြောင့် အရေးတကြီး ခေါ်ပြီး ဘာတွေ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
အခုအစည်းအဝေးကို လူသိရှင်ကြား ခေါ်ဆိုသူက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းပါ။ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ မအောင်မြင်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက် ကာလုံအစည်းအဝေး ခေါ်ယူလုပ်ဆောင်ရင် ပိုကောင်းတယ် ဆိုပြီး သူရဦးရွှေမန်းက ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။
ပြည်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီတွေ၊ ကော်မရှင်တွေက ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပါဝင်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အခက်အခဲ တွေ ကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးက တပ်မတော်သားတွေအပါအ၀င် အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ သူရဦးရွှေမန်းက ပြောဆိုသွားတယ်။
"လွှတ်တော်မှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်တရားရေး ကော်မတီ၊ ပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတို့ရဲ့ပါဝင်မှု၊ စောင့်ကြည့်မှု၊ ကူညီမှုများလည်းလိုတယ်။ အဲဒါတွေ မပါဘဲနဲ့ ခက်ခဲတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီအဖွဲ့တွေ ပါဖို့လိုသလဲဆိုတော့ ဒီအဖွဲ့တွေသည် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် များနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ သူတို့ပါရင် ပိုအားရှိတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသား အားလုံးလိုတယ်၊ ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးလိုတယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ တပ်မတော်သားတွေ အားလုံးလိုတယ်" လို့ သူရဦးရွှေမန်းက ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ သူ ဘာကြောင့် ကာလုံ အစည်း အဝေး ခေါ်ယူဖို့ သမ္မတဆီ သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့ရသလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြတယ်။
လတ်တလော ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုတွေကို သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ လုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီက အဓိက ဦးစီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံတခုကို နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားလို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး တာဝန်ရှိသူတွေက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။
သူရဦးရွှေမန်း ကာလုံအစည်းအဝေး ခေါ်ယူခိုင်းတဲ့သတင်းကြောင့် နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်း နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေ ကြားမှာ ရိုက်ခတ်မှု အတော်ကြီးသွားပါတယ်။
ဒီကောင်စီက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း ၁၁ အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ နိုင်ငံတော် အရေးပေါ်အခြေအနေ၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အမိန့်တွေ ထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့ အမြင့်ဆုံးသော အာဏာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တခုလို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဒီကောင်စီရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ များပြားလှပြီး တန်ခိုး အာဏာ ထက်မြက်လှပါတယ်။
သူရဦးရွှေမန်းက အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေး ခေါ်ယူခိုင်းတဲ့ သတင်းကြောင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ သူရဦးရွှေမန်းကြားမှာ နိုင်ငံရေးအရ အာဏာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပြင်းထန်လာတဲ့အခြေအနေ ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းက သုံးသပ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး အကြောင်းပြချက် ခေါ်ယူခိုင်းတဲ့ ကာလုံ အစည်းအဝေးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လို အာဏာလွန်ဆွဲပွဲတွေ ရှိနေ မလဲလို့ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းက စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
ကာလုံအဖွဲ့ဝင်တဦးကလည်း အစည်းအဝေးလုပ်တိုင်း အစိုးရက တင်ပြပြောဆိုချက်ကို နားထောင်နေရတာချည်းပဲလို့ ဧရာဝတီကို ပြောဖူးပါတယ်။
လက်ရှိ အခြေအနေမှာ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်ကြားမှာ သိသာထင်သာတဲ့ အကွဲအပြဲတွေ တောက်လျှောက် ဖြစ်ထွန်းလာဖို့ ရှိတယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေ ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ ရွေးချယ်တဲ့ ကိစ္စ လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရအကြားမှာ ထင်သာမြင်သာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ သဘောထားကွဲလွဲမှုတခုလို့ နိုင်ငံရေးသမားတချို့ ကသုံးသပ်ပါတယ်။
ကာလုံအစည်းအဝေးကို ငြိမ်းချမ်းရေး မအောင်မြင်လို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ခေါ်ယူခိုင်းတာက ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးလို့ သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ဖို့ ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းဦးဆောင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုကော်မတီ၊ ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတွေ ဖွဲ့စည်းထားပြီး အဲဒီကော်မတီတွေမှာ တပ်မတော်က ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းပါ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တန်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုကော်မတီ အထူးအစည်းအဝေး ခေါ်ယူလိုက်ရင် ပြီးစီးနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိတယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
တချို့ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်တဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီတွေက တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ သူတို့ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြ နေတာမို့ အဲဒီဆန္ဒ တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကာလုံအစည်းအဝေး ခေါ်ယူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေးသမားအများစု သဘောတူတာကတော့ သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အကြား အာဏာပြိုင်ဆိုင်မှုက သေချာပေါက်ရှိနေပြီဆိုတာကိုတော့ အားလုံးက လက်ခံကြတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရမှာပါဝင်နေတဲ့ အစိုးရ၀န်ကြီးတွေ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ဘက်က အမြင်မကြည်လင်မှုတွေ ရှိနိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦးခင်ရီ အပါအ၀င် အစိုးရထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ၅ ဦးက ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနေ တရားဝင်နုတ်ထွက်လိုက်ပြီလို့ ဦးစိုးသိန်းက တရားဝင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အရ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကနေ နုတ်ထွက်ကြတာဖြစ်လို့ ဦးစိုးသိန်းက ပြောဆိုလိုက်ပေမယ့် သမ္မတဦးသိန်းစိန် ကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားပြီး သူရဦးရွှေမန်း ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးရယူလိုက်ချိန် ကတည်းက သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ ဦးသိန်းစိန်အကြား တရားဝင် အာဏာ လွန်ဆွဲပွဲ စတင်လိုက်တာဖြစ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
"အရင်တုန်းကတော့ အာဏာလုပွဲက ဘာမှ သိပ်ပြီး မသိသာဘူး။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၂ ကြံ့ခိုင်ရေးပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံက သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တင်မြှောက်ထားတာကို သူရဦးရွှေမန်းက ဖယ်ရှားပြီး ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး ယူလိုက်ကတည်းက သူတို့ ၂ဦးကြား အာဏာလွန်ဆွဲပွဲ တရားဝင် စတင်လိုက်ဆိုတာ အချက်ပေး ခေါင်းလောင်းသံ ထိုးလိုက်တာပဲ" လို့ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူ တဦးက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း လတ်တလော သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ အတော်ကို အဆင်ပြေနေပုံရှိတဲ့အပြင် သမ္မတဦးသိန်းစိန် ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်လိုက် တာမို့ သူရဦရွှေမန်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုက တဖက်၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ တတိယအင်အားစု လို့ ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေက တဖက် ပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပုံစံရှိတယ်လို့ တချို့ နိုင်ငံရေးသမား တွေက သုံးသပ်ပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွင်းမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လက်မခံနိုင်တဲ့ သဘောထား တင်းမာသူ တွေရှိနေတာမို့ ပါတီတွင်း အုပ်စုဖွဲ့ ကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ နိုင်ငံလေ့လာဆန်းစစ်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာတဲ့အမျှ နိုင်ငံရေးအင်အား ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ လွန်ဆွဲပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်ရင်တော့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာဖို့ ခဲယဉ်းနိုင်ပြီး တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍလည်း အရေးပါနေဦးမယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာ သူရဦးရွှေမန်းအနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အကြီးအကဲ နာယက ရာထူးကိုလည်း ရယူတော့မှာမို့ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်အကြား ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ အရှိန်မြှင့်တက်လာနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။
လတ်တလော နေပြည်တော်မှာ ဒီနေ့ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့ ကာလုံအစည်းအဝေး ခေါ်ယူကျင်းပနေတယ်လို့ ပြည်တွင်းထုတ် The Voice သတင်းစာက သတင်းရေးသားဖော်ပြထားပေမယ့် ကာလုံအစည်းအဝေး အခြေအနေတွေကို သတင်းစုံစမ်းလို့ မရသေးပါဘူး။
ကာလုံအစည်းအဝေးက ထွက်ပေါ်လာမယ့် ရလာဒ်တွေက မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေအတွက် သက်ရောက်မှု ကြီးမားလိမ့်မယ်လို့ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
Posted: 01 Jul 2013 05:35 AM PDT
By: danyawadi in နေ့စဉ် မွတ်စလင်မ် သတင်း
မိမိဇာစ်မြစ်ကို မိမိမသိသော မြန်မာ (MYANMAR WHO DON'T KNOW THEIR OWN ORIGIN)
နေသောအချိန်အခါ လည်းဖြစ်သည်။ဒါ ပေမယ့် ကုလား၏အဓိပ္ပာယ် နှင့်
ဗုဒ္ဓ ၏ အဓိပ္ပာယ်၊ အနှစ် သာရကိုသိပါသလား လိုမေးလျင်တိကျသော
အဖြေပေးနိုင်သူ မရှိသလောက် ဖြစ်သည်ကိုမည့်သူမျှငြင်းနိုင်မည်မဟုတ်
ပါ။ ကုလားဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တစ်လုံးတည်း တောင့်မသုံးဘဲ လီးကုလား၊
စောက် ကုလား၊အမေလိုးကုလား စသည်ဆဲဆိုတဲ့ စကားလုံးများနှင့်တွဲ
ဖက်သုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ထိုသို့ ဆဲဆို ခြင်းဖြင့် မိမိကိုး ကွယ်
ချုပ်ရေးသဘောအရ ကုလားလူမျီုးများသည် မွေးရာပါကံမ ကောင်းလို့
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း မွေးဖွားလာသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ တွင်းမွေးဖွားလာသူ
ဘယ်ကုလားမျှ မိမိကို မိမိမြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားလာခြင်း အတွက်မိမိ
ကိုးကွယ်သောဘုရား ကိုကျေးဇူးတင် မည်မဟုတ်ပါ။
ကုလားဆိုသည်မှာ ကုလပုတ္တ ဆိုသော (ဗြဟ်မီ) စကားလုံးမှဆင်းသက်
လာပြီး ကုလ် နှင့် ပုတ္တ တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ် သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ
အားလုံးပြီးပြည့်စုံသော သူ (မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ ဘုရားဖြစ်တန်သောသူ၊
အလွာအတန်းစားမြင့်သူ၊အလုံးစုံ)ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဥပမာ ကုလသမဂ္ဂ
ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးသမဂ္ဂ (ရုံး)။ ကုလဇီဝ၊ ဘဝ တစ်ခုလုံး စသည်ဖြင့် ဖြစ်
သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ် စွာဘုရားကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင် မျိုးဆက်သုံးဆက်ထိထိ
ဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်ချက်နှင့် ကုလားဆိုတဲ့စကားလုံး၏ အနှစ်သာရအရ
ကုလားလူမျိုးသာလျင် ဘုရားဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော မျိုး
ကောင်းမျိုးသန့်ပြည့်စုံသူ ပါရမီပြည့်မှဘုရားဖြစ်မည်၊ ဘုရားဖြစ်ရန်ပထမ
မြင့်နိုင်၊ ဝင်နိုင်ဦး စသည်တို့ကိုစွန့်လွတ်ပြီး ဝီရသူ (Veera=Hero ), ဥတ္တမ (Uttam Better) ပညာဝရ (Panyawar စာတတ်ပေတတ်) စသည်ဖြင့်
တောင်မဝတ်နိုင်သည့်အတွက် ကုလား ဟန်ဆောင်ပြီးဘုန်းကြီးဝတ်ရ
သည့် သဘောပါဘဲ။ ကုလားကို ဆဲလျှင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစွန့်လွတ်ရန်မှအပ
မြန်မာစာပေသည် မြန်မာလူမျိုးတွေက ထီတွင်ထားသောစာပေမဟုတ်ဘဲ ကုလားဗြဟ်မီစာပေမှ တိုက်ရိုက်ကူးယူထားပြီး အချောင်းကိုအလုံးသို့လည်း
ကောင်း စက်ဝိုင်းခြမ်း နှင့် ဘဲဥပုံကိုစက်ဝိုင်းသို့လည်းကောင်း၊ ၊ခေါင်းရှည်
ကိုခေါင်းတိုသို့လည်းကောင်း ပြောင်းယူခြင်းသာဖြစ်သည်။ မြန်မာ့စကား
သည်လည်း ၆၀% ကျော် ကုလားစကားမှယူထားပြီး Sha,Sa(ရှ နှင့် စ)
အသံကို Tha (သ) အသံဖြင့်လည်းကောင်း၊ရှေ့တွင် သဝေထိုး မပါဘဲ
ဖြင့်လည်းကောင်း ပြောင်း ယူခြင်းသာဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလီစကားလုံး နှင့် မြန်မာစကားလုံးတို့ကိုအောက်တွင်နှိုင်းထားသည်ကို
7) Gautam=ဂေါတမ Rahul = ရာဟုလ
36) Shabapati=သဘာပတီ …… စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Ministry of Tourism ကတရားဝင်ကြော်ငြာထားသည်မှာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေး
မူသည် Indo China (ကုလား/တရုပ် ဖက်စပ်) ယဉ်ကျေးမူဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်မြန်မာ အဝတ်အစားသည် ကုလားကဲ့သို့ မလုံခြုံဘဲ၊ တရုပ်ကဲ့သို့
လည်း အလှန်မဟုတ်ပေ။ မြန်မာ လူမျိုး တစ်ချို့ နှင့် ဝိနည်းနှင့် မညီသော သင်္ကန်းဝတ် တစ်ချို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓမြတ် စွာ သည်နိဗ္ဗာန်တွင်ပင် စိတ်ညစ်နေ
ရမည်မှာ သေချာပါသည်။ ကျေးဇူးရှင်ကုလားကိုစော်ကားနေသည် အပြင်
ဘုရားကိုပါဆဲဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစာပေ အက္ခရာနှင့်ဗျဉ်းတို့ကို
ကုလားစာပေနှင့်အောက်တွင်နှိုင်းယှဉ်ပြထားသည်။ မြန်မာစာပေတွင်(အ) ဆိုတဲ့ သရကိုဗျည်းနှင့်တွဲထားသည်မှ လွဲပြီးအစီစဉ်ကအစ ထပ်တူတူညီ
Posted: 01 Jul 2013 05:30 AM PDT
Bekas Ketua Siasatan Jenayah Polis Kuala Lumpur, Datuk Mat Zain Ibrahim menyarankan penubuhan Suruhanjaya Siasatan DiRaja (RCI) bagi menyiasat empat individu berprofail tinggi yang didakwa mempunyai konflik kepentingan.
Menurut Mat Zain mereka ialah Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak; Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi; Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dan Peguam Negara, Tan Sri Abdul Gani Patail.
Beliau menyarankan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapatkan persetujuan jemaah menteri bagi mendapatkan perkenan Yang DiPertuan untuk menubuhkan RCI bagi menyiasat keempat mereka yang terlibat mengikut terma-terma rujukan yang kabinet fikirkan wajar.
"Rakyat sedang menunggu apakah tindakan yang akan dikenakan terhadap Zahid yang didakwa telah mendatangkan cedera parah ke atas seorang awam Amir Bazli Abdullah pada tahun 2006.
"Begitu juga dengan Khalid setelah Hakim Datuk VT Singham mendapati beliau cuai untuk mempastikan keselamatan saspek di bawah jagaannya, selain cuba menyembunyikan punca kematian A Kugan, ketika beliau bertugas sebagai Ketua Polis Selangor," katanya.
Mat Zain berkata, orang yang boleh mengambil tindakan terhadap Zahid dan Khalid ialah Najib yang telah menasihatkan Yang DiPertuan Agong untuk melantik kedua-dua mereka.
"Orang yang mempunyai kuasa untuk memutuskan sama ada untuk memulakan prosiding jenayah terhadap Zahid dan Khalid atau sebaliknya ialah Abdul Gani.
"Peguam Negara dengan kuasa yang dibekalkan kepada beliau dalam perlembagaan, selain daripada bertanggung jawab untuk menasihati YDP Agong dan jemaah menteri dalam perkara berkaitan undang-undang.
"Malangnya kedua-dua Najib dan Gani pula, didakwa terlibat dengan beberapa salahlaku jenayah serius dan mereka masih belum membersihkan diri masing-masing, daripada siasatan polis yang sedang atau yang sepatutnya telah dijalankan ke atas mereka.
"Nyata keempat mereka iaitu Najib, Zahid, Gani dan Khalid berada dalam situasi konflik kepentingan masing-masing," katanya dalam suratnya kepada Muhyiddin hari ini.
Manakala salinannya dihantar kepada Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Ali Hamsa, Peguam Cara Negara Datuk Idrus Harun dan Khalid.
"Saya ingin nyatakan di sini, terdapat precedent di mana Timbalan Perdana Menteri menyembahkan permohonan kerajaan untuk penubuhan RCI dan mendapat perkenan YDP Agong.
"Ini ialah berkaitan RCI mata-lebam yang dipekenankan oleh YDP Agong bersandarkan permohonan yang disembahkan dan ditandatangani oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi ketika itu Timbalan Perdana Menteri pada3Februari 999 serta telah diperkenankan pada tarikh sama.
"Tindakan itu dipercayai kerana Perdana Menteri ketika itu, Tun Mahathir Mohamed berada dalam situasi konflik kepentingan.
Ini berikutan pada 1 Oktober 1998, beliau telah mengumumkan pendapat beliau bahawa kecederaan yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah akibat self-inflicted, sedangkan siasatan polis baru sahaja dimulakan beberapa hari sebelum itu pada 27 September 1998," tambah beliau.
Menurut Mat Zain lagi, pada 8 Oktober 1998, pegawai penyiasat telah memberi taklimat kepada Dr Mahathir kecederaan yang Anwar alami bukan akibat self-inflicted tetapi akibat dicederakan oleh mantan Ketua Polis Negara.
Beliau berkata, Muhyiddin tidak boleh mengenepikan cadangan menubuhkan RCI dalam menyelesaikan kemelut ini sebagai suatu cadangan yang tidak munasabah atau luar biasa.
Precedent menangani kebuntuan seperti yang dihadapi sekarang, bukan dicedok atau ditiru daripada mana-mana negara lain, sebaliknya adalah keputusan jemaah menteri sendiri di mana Tan Sri (Muhyiddin) dan Najib, antara menteri yang membuat keputusan sedemikian, tambah beliau.
Melainkan jika Muhyiddin atau kabinet sedia ada, mempunyai idea atau cara yang lebih berkesan dan efisyen lagi untuk menyelesaikan situasi deadlock yang dihadapi sekarang ini,maka RCI hendaklah ditubuhkan segera.
Kata Mat Zain lagi, sebarang kelengahan atau keengganan membuat keputusan berkaitan kemelut ini, akan dilihat sebagai percubaan untuk melindungi salahlaku jenayah mereka yang terlibat dengan tujuan mengelakkan mereka dari dikenakan hukuman undang-undang.
"Sekiranya seorang pegawai polis yang berpangkat sekadar Asisten Komisioner pada masa itu, sanggup bersemuka dengan Dr Mahathir dan memberikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat Perdana Menteri yang telah diumumkan secara rasmi, maka saya yakin YAB Tan Sri tidak ada masaalah untuk menangani kemelut yang ada di hadapan rakyat dan kerajaan seperti sekarang ini," tambah Mat Zain. -FMT
Posted: 01 Jul 2013 02:45 AM PDT
Afteralong while, I managed to catch up with some of my old school mates yesterday. The occasion was the Penang Free School Homecoming Carnival 2013 at the school field. Bumped into so many people that I knew but the icing on the cake could only be meeting those guys whom we had happily bummed around with since some 40 or 50 years ago.
This picture below was snapped in front of the pavilion. The banner was supposed to have been held up by balloons but it was my fault that I inadvertently released them. Oh, well....
Just takealook at that Subra, will you? At first, we thought that he had dug out his old school uniform and playedaoneupmanship game on all of us but on second thoughts, no. But it would have been hilarious if he had actually donned the old school tie as well.
That's us again at lunch. Among the seven of us, I do meet up with Oon Hup, Andrew and Kah Theang occasionally since we are all moving around in Penang but certainly less often meeting up with Abu Huraira or Abdullah Sani. As for Subra, the interval has been even longer. If I'm not mistaken, the last we saw one another face-to-face could be in November 1972 when we were all nervously sitting for our Higher School Certificate examinations. Yes, it was actually that long ago. But he hasagood memory. He actually remembered the old apom seller beside my home in Seang Tek Road.
Posted: 30 Jun 2013 04:30 PM PDT